အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမား ပြန်လည် အရွေးခံရမှု အပေါ် အမြင်များ | ဧရာဝတီ
အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမား ပြန်လည် အရွေးခံရမှု အပေါ် အမြင်များ
| | အမေရိကန် သမ္မတ နေရာ ဒုတိယ သက်တမ်းအတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ထပ်မံအနိုင်ရရှိပြီးနောက် ချီကာဂိုမြို့တွင် မိသားစုနှင့် အတူ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများကို နှုတ်ဆက်နေသော သမ္မတ အိုဘားမား (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့က ကျင်းပသည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ၌ လက်ရှိ သမ္မတ အိုဘားမား က ပြိုင်ဘက် သမ္မတလောင်း မစ်တ် ရွန်မ်နေ(Mitt Romney)ကို မဲအသာစီးဖြင့် အနိုင်ရရှိသွားပြီး ယင်းအနိုင်ရရှိမှုအပေါ် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အသိုင်းအ၀ိုင်းက ကြိုဆိုလိုက်ကြသည်။ အိုးဘားမား အနိုင်ရရှိမှုက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး နှင့် မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး အပေါ် မည်သို့မည်ပုံ သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်မည်ကို တိုင်းရင်းသားများနှင့် ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေး အသိုင်းအ၀ိုင်း အား ဆက်သွယ်မေးမြန်း စုစည်း ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(NLD) နာယက
ကျနော့် အမြင်ကတော့၊ ကျနော်ကတော့ ၀မ်းသာတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အမေရိကားဆိုတာက ကျနော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက မြင် ခဲ့တဲ့ပုံစံအရဆိုရင် တကယ်ကို အသားအရောင်ခွဲခြားမှုနဲ့ လွှမ်းမိုးတဲ့ တိုင်းပြည်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလို နိုင်ငံမျိုးမှာ ကျော်ကြားတဲ့ ထင်ရှား တဲ့ နိုင်ငံရေးသော်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေးသော်လည်းကောင်း၊ လူမှုရေးအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ တခြားအားကစား တို့မှာ သော်လည်းကောင်း တိုးတက်ပြောင်းလာပေမယ့် လူမည်းတွေက ဘယ်တော့မှ နေရာမရဘူး။ သူ့တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုက လက် မခံဘူး။ အဲဒီကနေ ပြောင်းလဲလာပြီးတော့ အခု သမ္မတ အိုဘားမား နိုင်တယ်။ အိုဘားမားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ဝေဖန်ချက် တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့။ အလုပ်လက်မဲ့ ပြဿနာတွေ၊ စီးပွားရေး၊ စစ်ရေး ပြဿနာတွေ နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဝေဖန်ကြတယ်။ ဒီလိုပြဿနာတွေ အများကြီးကြားကနေ အိုဘားမားက တပတ်တည်းနဲ့ပြုတ်သွားနိုင်တယ်။ သူသာ ပြုတ်သွားရင် လူမည်းတွေရဲ့ ရှေ့နိုင်ငံ ရေး အလားအလာကလည်း အများကြီးလျော့ပါး သွားမယ်။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံအတွက် ဒီမိုကရက်တစ် အင်အားစုတွေက အများကြီး အကူအညီ ပေးတယ်။ အထူးသဖြင့် NLD တို့ဘက်ကနေ ရပ်တည်ပေးတယ်ဆိုတော့ ဘာပဲပြောပြော အိုးဘားမားနိုင်တာ ကောင်း တယ်လို့ပဲ မြင်ပါတယ်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ ခေါင်းဆောင်
တကယ်တော့ အမေရိကန်သမ္မတ အပြောင်းအလဲက ကျနော်တို့အပေါ် ကြီးကြီးမားမား သက်ရောက်မှုလို့ မမြင်ဘူး။ ကျနော်တို့ပြည် တွင်းမှာ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ ကျနော်တို့နိုင်ငံသားတွေ အတူတူအလုပ်လုပ်နိုင်ရင် တိုးတက်မှာပဲ။ သို့သော် အိုဘားမားက ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ကို လာဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ် ဆိုတော့ နောက်ထပ်ဆက်ခံမယ့် သမ္မတဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ဆက်ပြီးတော့ အလုပ်လုပ် တဲ့ အခါ၊ ပြောဆိုတဲ့အခါမှာ ပိုပြီးတော့ အားရှိတာပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ပြည်သူလူထုက ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာ အဆုံးအဖြတ် ကို တည်တည်ကြည်ကြည် ခံယူကြတယ်။ အနိုင်ရတဲ့သူနဲ့ အရေးနိမ့်တဲ့သူတွေက လွှတ်တော်ထဲမှာ ဆက်ပြီးတော့ လက်တွဲ အလုပ် လုပ်ကြဦးမယ်။ အဲဒီ နမူနာကောင်းတွေကို ကျနော်တို့ယူသင့်တယ်။ လက်ရှိ အိုဘားမားအစိုးရနဲ့ ဒီက အစိုးရနဲ့က ဆက်ဆံရေး ကောင်းထားပြီးသား ဆိုတော့ သူဆက်ရှိနေတာက ဆက်ဆံရေး ပိုကောင်းမယ်လို့ မျှော်လင့်ရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ရှမ်း တိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(SNLD) ဥက္ကဋ္ဌ
အိုဘားမား ရသွားတာ ကောင်းပါတယ်။ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ပြဿနာက မပြီးသေးဘူး။ သူ့အနေနဲ့ ပါဝင်ဆောင်ရွက် သွားရင် ကောင်းတာပေါ့။ တိုင်းရင်းသား အရေးကလည်း မပြီးပြတ်သေးဘူး ဆိုတော့ ဆက်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်နေရတယ်။ အမေရိကန်နဲ့ မြန်မာ ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းလာမယ်။
သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်နှင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီသစ် ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ
ကျနော်အနေနဲ့ သမ္မတ အိုဘားမား သမ္မတဟောင်းကနေ သမ္မတအဖြစ် ပြန်ရွေးခံရတာကို ကြိုဆိုတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင် စုရဲ့သူတို့ပြည်တွင်းရေးမှာ ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ အိုဘားမားရဲ့စွမ်းဆောင်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောကြဆိုကြတာတွေ ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံရေး မြန်မာ-အမေရိကန် ချစ်ကြည်ရေး အဆင့်မြင့်နေတဲ့ကာလမှာ အိုဘားမားက ကျနော်တို့တိုင်းပြည် အကြောင်း ထဲထဲဝင်ဝင် သိတယ်။ အိုဘားမား သမ္မတ အဖြစ် အရွေးချယ်ခံရတာက ကျနော်တို့ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွား အတွက် အထောက်အကူဖြစ်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အိုဘားမား အနိုင်ရတာကို ကျနော် ၀မ်းသာတယ်။ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေ အားကောင်းလာပါတယ်။
ရခိုင်ရေးရာဝန်ကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ
ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ(RNDP)
အိုဘားမားပြန်ပြီးတော့ သမ္မတ အဖြစ် ပြန်ရတာကို ကြိုဆိုပါတယ်။ သမ္မတ အိုဘားမားက ကျနော်တို့ နိုင်ငံကို ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ အရာ တွေကို အများကြီး ဖြေလျှော့ပေးတယ်။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကိုလည်း အမေရိကန် ဖိတ်ခေါ်တယ်။ အဖယ်ခံရတဲ့ လူကြီးတွေကိုလည်း ဗီဇာပြန်လုပ်ပေးတယ်။ အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန် စီးပွားရေး စစ်ရေးတွေ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ အားလုံးခွင့်ပြု ပေးတယ်။ သူက အပြုသဘောမျိုး အစပျိုးထားတော့ နောင်လာမယ့် ၄ နှစ်မှာ ကျနော်တို့နိုင်ငံအတွက် ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်း
ကိုရောက်အောင် အပြုသဘောမျိုးနဲ့ အားလုံးဝိုင်းပြီး ကူညီကြမှာပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံက ကျနော်တို့နိုင်ငံကို ဆက်ပြီး ကူညီပံ့ပိုး ပေး သွားမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ၏ အမျိုးသား စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး အကြံပေး ကောင်စီဝင်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင်
ဒီဘက်ကလူတွေက စဉ်းစားတာကတော့ ဘားရက် အိုဘားမားအနေနဲ့ သူ့ရဲ့အရင်သက်တမ်းတုန်းက သူအောင်မြင်ခဲ့တာတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲကလည်း သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတခုလို့ မြင်ကြ မှာပေါ့။ မြန်မာဘက်က လူတွေ အတွက်တော့ အိုဘားမား သမ္မတပြန်ဖြစ်တော့ အမေရိကန်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးအတွက် အစက ပြန်စ စရာမလိုတော့ဘူး။ သူရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာနက အရင်ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိထားပြီးသားဖြစ်တော့ နားလည်နေပြီးသာဖြစ်တယ်။ မကြာခင်မှာ သမ္မတ အိုဘားမားကလည်း ဒီကိုလာဖို့ရှိနေတော့ သူတို့ပေါ်လစီကလည်း ရှိပြီးသား ဖြစ်နေတော့ ဆက်ဆံရေးမှာ ပိုပြီးတော့ မြန် ဆန် လာမယ်။
ချင်း အမျိုးသား ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ
ကျနော်တို့ ရဲ့ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲအတွက် သူ့အစိုးရနဲ့ လုပ်လက်စဟာတွေ ဆက်ပြီးတော့ အားတခုအနေနဲ့ရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကြိုဆိုပါတယ်။ သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေ ဆက်လက်ပြီးတော့ အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ပိုကောင်းလာမယ်လို့ မျှော်လင့်ချက် များလာတာပေါ့။
ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ (မြန်မာ) ဥက္ကဋ္ဌ
အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ သမ္မတလောင်းနှစ်ဦးက သူတို့တိုင်းပြည်မှာ ထိပ်ထိပ်ကျဲတွေပဲ။ ဘယ်သူနိုင်နိုင် သူတို့ အတွက်တော့ ကောင်း တာပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကြည့်ရင် ကျနော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့ ဆက်ဆံရေး အခြေအနေ ကောင်းလာတာက အိုဘားမား လက်ထက် မှာဖြစ်တာပေါ့။ ဒီအရှိန်လေးတွေ မပျက်စေချင်ဘူး။ ဒီအရှိန် ပိုကောင်းလာမယ်။ ဆက်ပြီးတော့ အိုဘားမားပဲ ဆက်နိုင်တော့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အရေး ဆက်ကောင်းသွားလိမ့်မယ် လို့ထင်ပါတယ်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု ပါတီ(NDF) ဥက္ကဋ္ဌ
ကျနော်တို့ကတော့ အိုဘားမားနိုင်တာ ကြိုဆိုတယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေလည်း ကြိုဆိုကြလိမ့်မယ့်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ပိုပြီးတော့ လမ်းကြောင်းသွားတဲ့အခါ ပြည်သူ၊ အုပ်ချုပ်သူတွေ၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လူထု လူ တန်းစား အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနဲ့ အမေရိကန်အစိုးရနဲ့က အတော်အတန် အတိုင်းအတာတခုအထိ ထင်သာမြင်သာ ရှိသွားတဲ့ အနေအထား ရှိနေပြီ။ တဖက်နဲ့ တဖက်နဲ့ လေ့လာမှုတွေရှိပြီးသား အိုဘားမားဆက်ရှိခြင်းက မြန်မာနိုင်ငံကို နားလည်ပြီးသား ဖြစ် လို့ ဒီမိုကရေစီအတွက် အလားအလာတွေ ကောင်းနေတယ်။ တကယ်လို့သာ အိုဘားမားမနိုင်ဘဲ သူ့ပြိုင်ဘက် သမ္မတလောင်းနိုင် သွားရင် မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လေ့လာရဦးမယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင် ၂ နှစ်လောက်က မြန်မာကို ပြန်လေ့လာသုံးသပ်တာတွေလုပ်မှာပဲ။ အဲဒါဆိုရင် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုရုပ်ဖို့၊ အမေရိကန်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု တွေလာဖို့တို့ ဒီကိစ္စတွေက တော်တော်ခက်ခဲနိုင်သေးတယ်။ အိုးဘားမားနိုင်ခြင်းက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲမှုနဲ့ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးအတွက် အတော်ကို ကိုက်ညီလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကချင် အရေး လှုပ်ရှားသူ နှင့် Vision of Peace ဥက္ကဋ္ဌ
လူဖြူလူမည်း ပြဿနာတွေရှိခဲ့တဲ့ နိုင်ငံမှာ သမ္မတ အိုဘားမား ဆက်နိုင်တဲ့အတွက် အဖိနှိပ်ခံလူမျိုးတွေအတွက် အားတက်စရာဖြစ် တာပေါ့။ အိုဘားမားအနေနဲ့ သမ္မတအဖြစ် ဆက်ပြီးရပ်တည်တဲ့အခါမှာ တရားမျှတဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုး၊ ကိုယ်ရဲ့ဘာသာ ကိုပဲ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ တိုင်းပြည်အတွက် မကောင်းဘူး။ အဲဒါကြောင့် အခုလိုတက်လာတဲ့အပေါ်မှာ ၀မ်းသာတယ်။ ဂုဏ်ယူ တယ်။ သမ္မတတယောက် အနေနဲ့ တရားမျှတဖို့ လိုအပ်တယ်။ အနိုင်ရတိုင်းမှာ ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာ တဖက်သတ် မဆန်ဖို့ သူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒ အရ သူ့ရဲ့ဘာသာကိုပဲ အားထားခြင်း မဟုတ်ဘဲ မျှမျှတတလေး လုပ်သွားစေချင်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအရေးမှာ သမ္မတ အိုဘားမား ဘာတွေလုပ်နေသလဲဆိုတာ ကျမတို့ တိတိကျကျမသိရဘူး။ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အပေါ်မှာ မကျေနပ်ဘူး။ မြန်မာပြည် အရေး အပေါ်မှာ တဖက်သတ် ဆန်နေတယ်။ သူတို့ရဲ့စစ်တပ်နဲ့ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ လေ့ကျင့်ဖို့ လုပ်တာတွေ၊ တိုင်းရင်းသားအရေးကို သိပ်ပြီးတော့ ခံစားချက်မရှိဘူး။ အဲလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတော့ အိုဘားမား တက်လာပေမယ့် ကျမတို့ နိုင်ငံအတွက် နည်းနည်း စိုးရိမ် စရာ တောင် ဖြစ်နေတယ်။
ဒေါက်တာ မနန် တူးဂျာ
ကချင် ပြည်နယ် တိုးတက်ရေး ပါတီ(KSPP)
အိုဘားမားနိုင်တာ သဘောကျတယ်။ သူက ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် သူက မြင် ထားပြီးသားလေ။ သူ့လူတွေလည်း အများကြီး လွှတ်ထားတယ်။ လက်ရှိသံအမတ်ကြီးလည်း တော်တော်လေး သိနေပြီ။ ဟီလာရီ ကလင်တန် လည်း သိနေပြီလေ။ ဒီအစိုးရပဲ ဆက်ရှိနေမှာဆိုတော့ အစက ပြန်လုပ်စရာမလိုဘူး။ လုပ်စရာရှိတာကို ဆက်လုပ်သွားရုံပဲ။
အိုဘားမားနိုင်တာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကောင်းတယ်။ အခုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အမေရိကန် သံအမတ်က တော်တော်လေး ကို လေ့လာနေတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ ပြည်တွင်းစစ် ရပ်စဲရမယ်။ ပြည်တွင်းစစ် ရပ်စဲရေး တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ လိုလားချက်၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို သူတို့ အားပေးတယ်။ သူတို့က အရှိကို အရှိတိုင်း အမှန်ကိုအမှန်တိုင်း ဘက်မလိုက်ဘဲ အားပေးမှာလို့ထင် တယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့က ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ ပိုပြီးတော့ ပွင့်လင်းမြင်သာလာမယ်။ ပိုပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်း ရေး တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ အထောက်အကူပြုမယ်။ မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြစ်လာမယ်။
ကရင် ပြည်သူ့ ပါတီ တွဲဖက် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး
အိုဘားမား ရသွားတာ ကောင်းပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ စီးပွားရေးကို ပြန်ဖြေလျှော့ ပေးခဲ့တယ်။ သူ ရသွားတော့လည်း မြန်မာ့အရေးကို အစကနေ ပြန် မဆွေးနွေးရတော့ဘူးပေါ့။ အမေရိကန်နဲ့ မြန်မာ ဆက်ဆံရေး က ပြန်ကောင်းလာမှာပါ။ မြန်မာပြည်က စစ်အရာရှိတွေကို အမေရိကန်က စစ်ရေးသင်တန်း ပြန်ပေးမယ်ဆိုတာ ကောင်းပါတယ်။
သာလွန်ဇောင်းထက် နှင့် နန်းဆိုင်နွမ် ပူးပေါင်း တင်ပြသည်။
ရန်ကုန်-မန္တလေး အဝေးပြေးလမ်းနှင့် လေဆိပ် ပြင်ဆင်ရေး အမေရိကန် ကူမည်ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန်ခရီးအပေါ် သူတို့အမြင်မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အားပေးမည်ဟု အိုဘားမားပြော“နောက်ကျော ဓားနဲ့ အထိုးခံခဲ့ရတာ”ဦးသိန်းစိန် အိမ်ဖြူတော်ကို ခြေချခြင်း နောက်ကွယ် နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> pps12345 November 7, 2012 - 8:00 pm	လူမည်းတွေက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ အဖိနှိပ်ခံပါ။ လူမည်း သမ္မတ ဖြစ်တာ မြန်မာပြည်က အဖိနှိပ်ခံ တွေ အတွက်ဂုဏ်ယူစရာပါ။ ဒါပေမယ့် စစ်အစိုးရ လက်ထက်မှာ အထူးအခွင့်အရေး တွေရခဲ့တဲ့ စစ်သားသားသမီးတွေက ပါဂုဏ်ယူနေတယ် ဆိုတော့ စဉ်းစားစရာပဲ။ အာဏာရှင်ဟောင်း နေဝင်း အမေရိကန်ကို အားကိုးပြီး ပြည်သူကို နှိပ်စက် အိမ်နီးချင်းဖြစ်တဲ့ တရုတ်ကို ချ ခဲ့တာတွေ ကို ပြည်သူက အော့ကြောလန်နေပါပြီ။ အမေရိကန် နှင့် တရုတ်ကို ရန်တိုက်ပေးပြီး မြန်မာပြည်ကို အုပ်ချုပ်တဲ့ခေတ်က ကုန်သွားပါပြီ။ နေဝင်းလက်ထက် က ဗကပ ကို တရုတ်က လက်နက် တပ်ပေးခဲ့တာ နေဝင်း မကောင်းလို့ပါ။ ကို ကိုမမ စစ်သားဟောင်း သားသမီးများ ခင်ဗျား ပြည်ပအားကိုး တဲ့ခေတ်က ကုန်သွားပါပြီ။ ခင်ဗျား တို့ ဖေဖေ(ခ) အဘ နေဝင်း နှင့် သန်းရွှေ ကြောင့် အဆုံးမသတ် နိုင်သေးတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ကို မြန်မြန် အဆုံးသတ်ပေးကြပါဗျာ။ ခင်ဗျား တို့ အဘတွေ မိုက်ကြွေးကို ပြန်ဆပ်ပေးကြပါ။
Reply	baby sai November 7, 2012 - 8:49 pm	သူတို့ကိုရောယုံရလို့လား အထူးသဖြင့် ခွန်ထွန်းဦးပေါ့
Reply	Maung Lwin November 7, 2012 - 9:02 pm	“Congratulation to Mr.Obama and Family, and Democratic People of US” and Very Well Come to visit to Burma, thank you Mr.President of US.
I like all of comments of Our Leaders, except “Daw Baut Gar” who has not much knowledge about US and President of US.
I’m very happy for Mr. Obama won the 2nd time because He knows very well about “The Situation of Burma” and He had been supporting to change of Our Country Situation. Now we havealot of Problems while we are changing to “Democracy”, for example China, Muslim Bangalis, Security and Money.
At this time, We can’t except to get “Right-Judgement” and Right-Supporting” from UN which unstable under Russia, China and OIC. We only hope for US which is power full country and they know very well about “Muslim, Islam and Islamist” and only US and UK can handle to them. That’s why we need their help right now.
That’s why, I’m very happy for Mr.Obama won the 2nd time and We needalot of help from him. But this is only my personal feeling. Thank you.
Reply	mehmasah November 8, 2012 - 12:54 am	You guy need to ask our MON political VIEW!
Reply	swe htwe November 8, 2012 - 12:59 am	Daw bauk jar ,I don’t agree to you. Obama is not an idiot. What are you thinking about?your idea is very dangerous. Please express your opinion.
Reply	han han November 8, 2012 - 10:26 am	Yes,,,,,That very very Happy & very very good for our country & our Myanmar
( Burmese )people.
Mr . Obama please try for our country going well with U Thein Sein & Daw Aung san su kyi
Reply	ူlady November 8, 2012 - 11:56 am	Congratulation Obama..
Reply	FOX November 8, 2012 - 1:47 pm	ကိုမင်းကိုနိုင်ပြောသွားတာလေးကိုသဘောအရမ်းကျပါတယ်….ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှသာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်း၊ နိုင်ငံကိုပြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်…
Reply	shwe November 8, 2012 - 4:19 pm	Congratulation Mr Obama and his lovely family.I am very happy for he had been elected for the second term.I wish you can try your best for American as well as for my Motherland, Myanmar.We welcome you to visit our golden land.Thank you Mr President for you appreciate My mother’s dedication,Daw San Su Kyi.